Otu esi etinye & hazie Memcached na openSUSE Leap 15 - LinuxCapable
Tọzdee, Ọktoba 28, 2021 by Jọshụa James
Na njedebe nke nkuzi, ị ga-ama otu esi etinye ma hazie Memcached na sistemụ arụmọrụ gị openSUSE Leap 15.
Site na ndabara, openSUSE enweela Memcached na ebe nchekwa ya. Iji tinye Memcached, tinye iwu a:
Mbụ, pịgharịa gaa na MEMCACHED_PARAMAhịrị S:
Ugbu a, Memcached ka atọrọ ka ọ gee localhost, ma ị nwere ike ịtọ adreesị IP nke ime ma ọ bụ mpụga ma ọ bụrụ na achọrọ ya site na ịgbanwe 127.0.0.1.
Na-esote, n'otu ahịrị ahụ, ịnwere ike ịgbakwunye ọkọlọtọ ọzọ iji gbanwee ntọala. Otu n'ime ntọala kachasị ewu ewu iji gbanwee bụ nha ndabara nke 64MB ka ọ bụrụ ihe dị ịrịba ama ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nkesa dị ike.
Ọmụmaatụ ịgbanwe RAM ka ọ bụrụ 2GB site na 64MB:
Nhọrọ ọzọ na-ewu ewu bụ gbanyụọ UDP ma ọ bụrụ na achọrọghị ya.
Iji mee nke a, jiri ihe ndị a:
Memcached na-abịa na ndọtị dị iche iche maka asụsụ mmemme, mana a na-eji ya maka PHP. Agbanyeghị, openSUSE chọrọ ụfọdụ ebe nchekwa agbakwunyere arụnyere iji dọpụta ngwugwu ndị a ka ha anaghị egosipụta na ebe nchekwa ndabara.
Bubata ihe nkesa: php: ndọtị maka openSUSE Leap 15.3:
Bubata ihe nkesa: php: ndọtị maka openSUSE Leap 15.2:
Ozugbo emechara, megharịa ebe nchekwa ahụ.
Ihe atụ PHP 7.4:
Ihe atụ PHP 8.0:
Ihe atụ (PHP 8):
E kwesịghị ịhapụ TELNET ka ọ kparịta ụka na netwọk ọha yana machibido ya na gburugburu netwọkụ nkeonwe.
Nkuzi ahụ egosila gị otu esi etinye Memcached na sistemụ arụmọrụ gị openSUSE Leap 15, wụnye ọba akwụkwọ ndị ọzọ yana otu esi enweta ndepụta iwu ọnụ.
Categories openSUSE Tags Debara aha, megheSUSE Leap 15 Mail igodo